सिमानाको आर्थिक सौन्दर्य | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण सिमानाको आर्थिक सौन्दर्य
on: August 24, 2018 लेख | दृष्टिकोण
सिमानाको आर्थिक सौन्दर्य
कुनै पनि मानिस सिमानाविना स्वाभिमानी हुन सक्दैन । स्वाभिमानविना आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक तरीकाले सम्पन्न हुन सक्दैन । ती सबै नेपाली हुन्, जो नेपालको आजको मितिसम्मका लागि निश्चित भएको १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर भित्र बसोवास गर्दछन् । यो सिमाना भोलिका दिनमा विविध तरीकाले बढ्न पनि सक्छ । यसरी सिमानाले सम्पूर्ण नेपालीको सामूहिक पहिचान निर्धारण गरेको छ ।
स्पष्ट सिमानाविना राष्ट्रप्रति जनअपनत्व कायम गर्न सँभव हुँदैन र यसले समग्र आर्थिक विकासमा समेत प्रभाव पार्छ । नेपालको ओज सुगौली सन्धिपछि खुम्चिँदै गएको हामी पाउँछौं । यसको मूल कारण देशले जमीन गुमाउनु र नेपालको सत्तामा विदेशी प्रभाव बढ्नु थियो । जितको मनोवैज्ञानिक असर युगौंसम्म सकारात्मक रहन्छ भने हारको नकारात्मक मनोविज्ञान असर पनि युगौंसम्म रहिरहन्छ । सुगौली सन्धिपछि नेपालले कुनै स्वाभिमानी युद्ध लड्न पनि सकेन । सानातिना कागजी उपलब्धिबाहेक विश्वसामु कुनै स्वाभिमानको प्रतीक गाड्न पनि सकेन । आज पनि विश्वमञ्चले नेपाललाई एक गरिमामय देशको रूपमा आकलन गर्न सकेको छैन । यसको मूल कारण खुला सिमाना हुनु र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामा पनि खुला सिमानाको प्रभाव पर्नु हो ।
लागभग ७ सय वर्ष अगाडि विसं १४०६ मङ्सिर महीनाको शुक्ल नवमीका दिन नेपालमा एउटा घटना भएको थियो । त्यसबेला विदेशीले नेपालीलाई नेपालमै हराएको थियो । बङ्गाली सुल्तान समशुद्धिन इलियासले नेपालमा आक्रमण गरी अनेक वितण्डा मच्चाएर मठमन्दिरको सम्पत्ति लुटेर गएको थियो । त्यतिबेला केही भौतिक सम्पत्ति गुमेको थियोे । जमीन गुमेको थिएन, नेपालीको साहस र मनोबल गुमेको थिएन । तर, सुगौली सन्धिमा देशले जमीन गुमाउन पुग्यो । त्यसपछि नेपालीको बौद्धिक तथा सोचगत स्वनिर्णयको साहस निकै कमजोर भएको पाइन्छ । यो मनोकम्पन आजको राष्ट्रिय रोग हो, यसलाई मत्थर पार्नुपर्छ ।
सुगौली सन्धिको प्रावधानअनुसार सन् १८१६ बाट नेपालमा इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारले आप्mनो प्रतिनिधि राख्न थाल्यो । १९२३ बाट यसैलाई राजदूतावासमा परिणत गरियो । पहिलोपटक एडवार्ड गार्डनर भन्ने व्यक्तिलाई नेपाल पठाइयो । शुरुमा प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले उनीहरूलाई एउटा घरमा राखे । उनीहरूलाई त्यहाँ एक प्रकारले नजरबन्द जस्तो अवस्थामै राखेका हुन् । तर, विस्तारै उनीहरूले आफ्नो प्रभाव सेना र दरबारभित्र सम्म पुर्‍याए । पछि भीमसेन थापालाई बडो दुःखद तरीकाबाट मर्न बाध्य बनाउनमा कता कता ब्रिटिश सरकारको हात थियो भन्ने इतिहासकारको अनुमान छ । त्यसपछिका कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व आदि घटना एउटा जङ्गबहादुरलाई एकलौटी सुपर मेन देखाइएको छ । वास्तवमा हरेक घटनामा ब्रिटिश सरकारको साथ र सहारा जङ्गबहादुरमाथि थियो । यो कुराको सच्चाइ कसरी पनि प्रमाणित हुन्छ भने नेपालमा राणाहरू त्यो बेलासम्म शक्तिमा रहे जुन बेलासम्म अङ्ग्रेजहरू इण्डियामा थिए । १९४७ मा भारतबाट ब्रिटिश हारेर वा टिक्न नसकेर गए । त्यसको ४ वर्षपछि नेपालबाट राण शासन पनि गयो । यसरी नेपालका राणाहरू अङ्ग्रेजबाट संरक्षित थिए ।
सुगौली सन्धि अघिसम्म नेपालको सिमाना आजभन्दा निकै बढी थियो । लगभग ३ लाख ३४ हजार २ सय ५० वर्ग किमी विशाल क्षेत्रफलबाट खुम्चिएपछि नेपाल आज त्यसको आधाभन्दा कम अंशमा सीमित भएको छ ।
सीमा बढाउन नसकिएला तर यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । यसका लागि सीमालाई स्वाभिमानको प्रतीक बनाउनुपर्छ । आज पनि हाम्रो सीमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । एउटा सानो देशमा जो पनि जतिबेला पनि आउन र जानसक्छ भने त्यो देश कसरी आफ्नो खुट्टामा अडिन सक्छ ?
आफ्नो देशको सीमा व्यवस्थापन गर्न पाउनु आम नागरिकको जिम्मेवारी वा अधिकार हो होइन ? यसबारे सम्पूर्ण अख्तियार सरकारको मात्र हो वा नागरिकले पनि यसबारे सोध खोज र चासो राख्न पाउँछन् वा पाउँदैनन् त ?
पहिलो आर्थिक दृष्टिबाट सोचौं । खुला सिमानाबाट प्रवेश गर्ने मानिस हाम्रो देशको भूमिमा आउँदा केही शुल्क तिर्छ कि तिर्दैन ? यो आर्थिक प्रश्न हो परन्तु आवश्यक प्रश्न हो । बुद्ध, सगरमाथा र पशुपतिनाथको भूमि कहिल्यै निःशुल्क हुन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन । जो कोही पनि सिमानामा आएर केही समयमा फर्कने मानिसबाहेक अरू सबैसँग भिसा शुल्क लिएर एउटा छुट्टै कोष बनाएर विकासको फरक परिवेश शुरू गर्न सकिन्छ । यसका लागि भिसा प्रणाली लागू गरेर प्रत्येक दिन को को यहाँ आए र को को बाहिर गए भन्ने स्पष्ट अभिलेख राख्न जरुरी देखिन्छ ।
सिमानाको व्यवस्थापनको अर्को पक्ष शान्ति सुव्यवस्थासँग सम्बन्धित छ । नेपाल थोरै जनसङ्ख्या भएको मुलुक हो । यसका दुई छिमेकीहरूको जनसङ्ख्या विश्वमा सबैभन्दा धेरै छ । २ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका दुई छिमेकीको बीचमा नेपालजस्तो सानो मुलुक खुला सिमाना लिएर बस्नु शान्तिसुरक्षाको परिदृश्यबाट पनि खतराको विषय हो । सानोले अफ्नो सिमाना थुन्नुपर्छ ठ्लोले चाहे जे गरोस् । नदीहरूको जति भए पनि सागरमा पस्न सक्छन् किनकी सागरसँग नदी व्यवस्थापन गर्ने अथाह क्षमता छ । सागर नदीतिर आउन सक्दैन । आएमा किनाराका सबै घरबस्ती, खेत खलियान समाप्त हुन्छन् । त्यसैले नेपालले आफ्नो सिमाना शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालबाट भारत र चीनतर्फ जति मानिस गए पनि उनीहरूलाई खासै फरक पर्दैन । उनीहरूले मानव सागरलाई व्यवस्थापन गर्न अभ्यस्त छन् । तर, अन्य देशबाट १ लाख मानिस कतैबाट आए भने तिनलाई व्यवस्थित गर्ने तागत नेपालसँग छैन । भारतको असाम राज्यमा ४० लाख मानिसको कुनै अभिलेख नभेटिएको कुरा केही दिनअघि बीबीसीले बताएको थियो ।
म्यानमारबाट लाखौं रोहिन्ज्या मुसलमानलाई लखेटिएकाले उनीहरू बङ्गलादेशमा आएर शरण लिएर बसेका छन् । भुटानी शरणार्थी खुला सीमाकै कारण खुरुखुरु नेपाल छिरेका थिए । यसैगरी लाखौं बिहारी मुसलमान आज पनि बङ्गलादेशका शिविरमा दुःखका साथ बसेका छन् । तिब्बतका केही नागरिक नेपालमा शरणार्थीका रूपमा आएर बसेका छन् । यी र यस्ता घटना भोलि पनि दोहोरिन सक्छ, जसले नेपालको अस्तित्वमाथि नै कठिनाइ नआउला भन्न सकिँदैन ।
यसरी विभिन्न ठाउँबाट कुनै पनि समय अनेक मानिस नेपाल पस्न र बस्न शुरू गरेमा हाम्रो सानो देशले आर्थिक तथा व्यवस्थापन समस्याका कारण उनीहरूलाई पाल्न सक्ने छैन । देशमा शान्ति सुव्यवस्था खलबलिन सक्नेछ । त्यसैले अविलम्ब चारैतिर भिसा प्रणाली लागू गरेर नेपालको भविष्य र वर्तमानलाई सुरक्षित गर्नका लागि जागौं ।